ဘယ်အကျင့်ဆိုးတွေက လုပ်ငန်းခွင်မှာ အောင်မြင်မှုမရအောင် ဆွဲချနေတာလဲ? - For her Myanmar
ကြိုးစားနေပေမဲ့ လိုရာကို မရောက်နိုင်သေးတာ ဒါတွေကြောင့်များလား …
ဒီတစ်ခါတော့ ဘဝကိုအားမာန်အပြည့်နဲ့ဖြတ်သန်းချင်တဲ့၊ အောင်မြင်မှုတွေအများကြီးရချင်တဲ့ယောင်းတွေအတွက် လုပ်ငန်းခွင်ဝင်တဲ့အခါ အလုပ်ထဲမှာ မအောင်မြင်စေတဲ့ အမူအကျင့်လေးတွေကို ဖော်ပြပေးပါရစေ။ လက်ရှိအလုပ်ခွင်ထဲက ယောင်းတို့လည်း ကိုယ်ကြိုးစားနေရဲ့သားနဲ့ အောင်မြင်မှုနဲ့ အလှမ်းကွာနေတယ်လို့ ခံစားရတယ်ဆိုရင် ကိုယ့်မှာဒီလိုအကျင့်ဆိုးတွေရှိနေလားဆိုတာ ပြန်ပြီး သုံးသပ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
၁။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် လစ်မစ်ထားတာ။
အလုပ်မှာ တာဝန်သစ် တစ်ခုခုချပေးမယ်ဆိုတိုင်း ငါမလုပ်နိုင်ဘူး၊ အဲ့ဒါ ငါမလုပ်တတ်ဘူးလို့ ထင်တာမျိုး၊ တာဝန်သစ်ကို မယူချင်တာမျိုး၊ တစ်ခုခုရှိတိုင်း ငြင်းပယ်ဖို့ အသင့်ဖြစ်နေတာမျိုးက ကိုယ့်အလုပ်နဲ့ ဘဝတိုးတက်ရေးအတွက် နှောင့်နှေးစေပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့စွမ်းရည်က ဒီလောက်ပဲရှိတယ်လို့ လစ်မစ်ထားပြီးအထင်မသေးပါနဲ့။ လုပ်ကြည့်ပါ။ လုပ်ကြည့်ရုံတင်မကဘဲ ကိုယ့်အစွမ်းအစရှိသလောက် ကြိုးစားကြည့်ပါ။ ကိုယ်လုပ်ကြည့်တယ်၊ ကြိုးစားတယ်၊ မအောင်မြင်ဘူး ဒါကပြဿနာမဟုတ်ပါဘူး။ လူတိုင်းက နေရာတိုင်းမှာ အောင်မြင်အောင် မလုပ်နိုင်တာက ပြဿနာမဟုတ်ပါဘူး။ မလုပ်ကြည့်ချင်တာ၊ အသစ်အဆန်းကိုကြိုးစားကြည့်ချင်စိတ်မရှိတာကမှ ပြဿနာပါ။ ဒါကြောင့် အောင်မြင်တယ်၊ မအောင်မြင်ဘူးကို စိတ်ထဲမထားဘဲ ကြိုးစားကြည့်ပါ။
၂။ အခြားသူတွေကို အပြစ်ပုံချတာ၊ ဆင်ခြေတွေပေးတာ။
ဒါက ဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ သဘာဝပါ။ ငါဒီနေရာအထိမရောက်သေးတာ ဟိုဟာတွေကြောင့်၊ ဟိုလူ ဒီလူကြောင့်၊ ငါအလုပ်မှာ ဒီလိုအမှားရှိတာ ဒီကိစ္စကြောင့် အစရှိသဖြင့် ဆင်ခြေဆင်လက်တွေပေးပြီး ကိုယ့်အားနည်းချက်တွေ၊ ကိုယ့်အပြစ်တွေကို ဖုံးကွယ်တတ်တာမျိုးဟာ ဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာမဆို အောင်မြင်မှုနဲ့ အလှမ်းဝေးစေတဲ့ အမူအကျင့်ပါ။ ကိုယ့်တာဝန်ကိုယ် အပြည့်အဝယူပြီးကိုယ့်အားနည်းချက်ကိုယ် ဝန်ခံနားလည်ပြီး ပြင်ဆင်တတ်ပါမှ ကိုယ့်စွမ်းရည်တွေ တက်လာပြီး အလုပ်မှာလည်း အောင်မြင်လာမှာပါ။
၃။ စွန့်စားမှုယူရမှာကို ကြောက်တာ။
ဘဝနဲ့ လုပ်ငန်းခွင်ဆိုတာလည်း စွန့်စားမှုတွေ ပြည့်နှက်နေတဲ့နေရာပါ။ စွန့်စားမှုတွေပြုလုပ်ရဲသူတွေသာ အောင်မြင်ခြင်းပန်းတိုင်နဲ့ တစ်စထက်တစ်စ ပိုပိုနီးကပ်လာကြပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲ ကိုယ်နေနေတဲ့ရာထူးနဲ့ ကိုယ်ရနေတဲ့လစာလေးမှာ တင်းတိမ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ ဘဝမှာ အောင်မြင်မှုကြီးကြီးမားမားရမလာဘဲ အလုပ်ခွင်အတွင်းက သာမန်ရာထူးနဲ့ လစာမှာပဲ ရပ်နေရမှာပါ။
၄။ ဘာကိုမှ ပြီးဆုံးအောင်မလုပ်ချင်တာ။
ဟိုလုပ်ငန်းခွင်မှာ ဟိုတာဝန်ကိုယူလိုက်၊ အဆုံးအထိ မလုပ်တော့ဘဲ လက်လွှဲပေးလိုက်၊ ဟိုသင်တန်းတက်လိုက် အဆုံးအထိလေ့လာသင်ယူတာမျိုးမရှိဘဲ ရပ်လိုက်ဆိုတာမျိုးဟာ အောင်မြင်မှုနဲ့ ဝေးကွာစေတဲ့အကျင့်ဆိုးပါ။ မြန်မာမှာစကားပုံတစ်ခုရှိတယ်နော်။ ငုတ်မိသဲတိုင်၊ တက်နိုင်ဖျားရောက်ဆိုတဲ့ စကားပုံပေါ့… အဲ့ဒီစကားပုံထဲကလိုပဲ ကိုယ်သေသေချာချာရွေးချယ်ထားတဲ့လမ်းခရီးကို ပြီးမြောက်အောင်မြင်သည်အထိ ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။
၅။ အချိန်ကို တန်ဖိုးမထားတာ။
တစ်နေ့ ရှစ်နာရီအလုပ်လုပ်ရမယ့်လုပ်ငန်းခွင်မှာ အလုပ်ကို ထိထိရောက်ရောက်မလုပ်ဘဲ အချိန်ဆွဲပြီး လုပ်တတ်တာတွေ၊ အလုပ်ထဲက လူတွေနဲ့ စကားတွေများနေတာတွေ၊ ဖေ့စ်ဘွတ်သုံးနေတာတွေက အလုပ်မတွင်စေ၊ အလုပ်မပြီးမြောက်စေပါဘူး။ Deadline နီးမှ အလောတကြီး အပြီးသတ်ရတာမျိုးတွေ၊ အသည်းအသန် ကပ်လုပ်တာမျိုးတွေက အောင်မြင်မှုနဲ့ အဝေးကြီးပဲ မဟုတ်လား… အလုပ်ကိစ္စက အရေးတကြီးအပြီးသတ်ရမှာမျိုးမရှိသေးလို့ဆိုပြီး ပေါ့ပေါ့ဆဆမနေဘဲ ကိုယ်အပြီးသတ်ရမယ့်အချိန်မှာ ပြီးအောင်၊ ပြီးပြည့်စုံအောင် ပြင်ဆင်ထားသင့်ပါတယ်။
အောင်မြင်ချင်ရင်တော့ သူများထက်သာတဲ့အားထုတ်မှု၊ သူများထက်သာတဲ့ လေ့လာသင်ယူမှုတွေဆိုတာ မရှိမဖြစ်ပါပဲ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယှဉ်ပြိုင်ပါ။ ဓားတစ်လက်လို အမြဲတမ်း သွေးပါ။ ဉာဏ်ရည်ကို အသုံးချပါ။ ပျင်းရင်း ဖျင်းမသွားပါစေနဲ့လို့..
ကွိုးစားနပေမေဲ့ လိုရာကို မရောကျနိုငျသေးတာ ဒါတှကွေောငျ့မြားလား …
ဒီတဈခါတော့ ဘဝကိုအားမာနျအပွညျ့နဲ့ဖွတျသနျးခငျြတဲ့၊ အောငျမွငျမှုတှအေမြားကွီးရခငျြတဲ့ယောငျးတှအေတှကျ လုပျငနျးခှငျဝငျတဲ့အခါ အလုပျထဲမှာ မအောငျမွငျစတေဲ့ အမူအကငျြ့လေးတှကေို ဖျောပွပေးပါရစေ။ လကျရှိအလုပျခှငျထဲက ယောငျးတို့လညျး ကိုယျကွိုးစားနရေဲ့သားနဲ့ အောငျမွငျမှုနဲ့ အလှမျးကှာနတေယျလို့ ခံစားရတယျဆိုရငျ ကိုယျ့မှာဒီလိုအကငျြ့ဆိုးတှရှေိနလေားဆိုတာ ပွနျပွီး သုံးသပျကွညျ့နိုငျပါတယျ။
၁။ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ လဈမဈထားတာ။
အလုပျမှာ တာဝနျသဈ တဈခုခုခပြေးမယျဆိုတိုငျး ငါမလုပျနိုငျဘူး၊ အဲ့ဒါ ငါမလုပျတတျဘူးလို့ ထငျတာမြိုး၊ တာဝနျသဈကို မယူခငျြတာမြိုး၊ တဈခုခုရှိတိုငျး ငွငျးပယျဖို့ အသငျ့ဖွဈနတောမြိုးက ကိုယျ့အလုပျနဲ့ ဘဝတိုးတကျရေးအတှကျ နှောငျ့နှေးစပေါတယျ။ ကိုယျ့ရဲ့စှမျးရညျက ဒီလောကျပဲရှိတယျလို့ လဈမဈထားပွီးအထငျမသေးပါနဲ့။ လုပျကွညျ့ပါ။ လုပျကွညျ့ရုံတငျမကဘဲ ကိုယျ့အစှမျးအစရှိသလောကျ ကွိုးစားကွညျ့ပါ။ ကိုယျလုပျကွညျ့တယျ၊ ကွိုးစားတယျ၊ မအောငျမွငျဘူး ဒါကပွဿနာမဟုတျပါဘူး။ လူတိုငျးက နရောတိုငျးမှာ အောငျမွငျအောငျ မလုပျနိုငျတာက ပွဿနာမဟုတျပါဘူး။ မလုပျကွညျ့ခငျြတာ၊ အသဈအဆနျးကိုကွိုးစားကွညျ့ခငျြစိတျမရှိတာကမှ ပွဿနာပါ။ ဒါကွောငျ့ အောငျမွငျတယျ၊ မအောငျမွငျဘူးကို စိတျထဲမထားဘဲ ကွိုးစားကွညျ့ပါ။
၂။ အခွားသူတှကေို အပွဈပုံခတြာ၊ ဆငျခွတှေပေေးတာ။
ဒါက ဖွဈလရှေိ့တဲ့ သဘာဝပါ။ ငါဒီနရောအထိမရောကျသေးတာ ဟိုဟာတှကွေောငျ့၊ ဟိုလူ ဒီလူကွောငျ့၊ ငါအလုပျမှာ ဒီလိုအမှားရှိတာ ဒီကိစ်စကွောငျ့ အစရှိသဖွငျ့ ဆငျခွဆေငျလကျတှပေေးပွီး ကိုယျ့အားနညျးခကျြတှေ၊ ကိုယျ့အပွဈတှကေို ဖုံးကှယျတတျတာမြိုးဟာ ဘယျလိုနရောမြိုးမှာမဆို အောငျမွငျမှုနဲ့ အလှမျးဝေးစတေဲ့ အမူအကငျြ့ပါ။ ကိုယျ့တာဝနျကိုယျ အပွညျ့အဝယူပွီးကိုယျ့အားနညျးခကျြကိုယျ ဝနျခံနားလညျပွီး ပွငျဆငျတတျပါမှ ကိုယျ့စှမျးရညျတှေ တကျလာပွီး အလုပျမှာလညျး အောငျမွငျလာမှာပါ။
Related Article >>> အောငျမွငျတဲ့ဘဝတကျလမျး အောငျမွငျတဲ့ Career သို့သှားမယျ
၃။ စှနျ့စားမှုယူရမှာကို ကွောကျတာ။
ဘဝနဲ့ လုပျငနျးခှငျဆိုတာလညျး စှနျ့စားမှုတှေ ပွညျ့နှကျနတေဲ့နရောပါ။ စှနျ့စားမှုတှပွေုလုပျရဲသူတှသော အောငျမွငျခွငျးပနျးတိုငျနဲ့ တဈစထကျတဈစ ပိုပိုနီးကပျလာကွပါတယျ။ အဲ့ဒီလိုမဟုတျဘဲ ကိုယျနနေတေဲ့ရာထူးနဲ့ ကိုယျရနတေဲ့လစာလေးမှာ တငျးတိမျနမေယျဆိုရငျတော့ ဘဝမှာ အောငျမွငျမှုကွီးကွီးမားမားရမလာဘဲ အလုပျခှငျအတှငျးက သာမနျရာထူးနဲ့ လစာမှာပဲ ရပျနရေမှာပါ။
၄။ ဘာကိုမှ ပွီးဆုံးအောငျမလုပျခငျြတာ။
ဟိုလုပျငနျးခှငျမှာ ဟိုတာဝနျကိုယူလိုကျ၊ အဆုံးအထိ မလုပျတော့ဘဲ လကျလှဲပေးလိုကျ၊ ဟိုသငျတနျးတကျလိုကျ အဆုံးအထိလလေ့ာသငျယူတာမြိုးမရှိဘဲ ရပျလိုကျဆိုတာမြိုးဟာ အောငျမွငျမှုနဲ့ ဝေးကှာစတေဲ့အကငျြ့ဆိုးပါ။ မွနျမာမှာစကားပုံတဈခုရှိတယျနျော။ ငုတျမိသဲတိုငျ၊ တကျနိုငျဖြားရောကျဆိုတဲ့ စကားပုံပေါ့… အဲ့ဒီစကားပုံထဲကလိုပဲ ကိုယျသသေခြောခြာရှေးခယျြထားတဲ့လမျးခရီးကို ပွီးမွောကျအောငျမွငျသညျအထိ ကွိုးစားသငျ့ပါတယျ။
၅။ အခြိနျကို တနျဖိုးမထားတာ။
တဈနေ့ ရှဈနာရီအလုပျလုပျရမယျ့လုပျငနျးခှငျမှာ အလုပျကို ထိထိရောကျရောကျမလုပျဘဲ အခြိနျဆှဲပွီး လုပျတတျတာတှေ၊ အလုပျထဲက လူတှနေဲ့ စကားတှမြေားနတောတှေ၊ ဖစျေ့ဘှတျသုံးနတောတှကေ အလုပျမတှငျစေ၊ အလုပျမပွီးမွောကျစပေါဘူး။ Deadline နီးမှ အလောတကွီး အပွီးသတျရတာမြိုးတှေ၊ အသညျးအသနျ ကပျလုပျတာမြိုးတှကေ အောငျမွငျမှုနဲ့ အဝေးကွီးပဲ မဟုတျလား… အလုပျကိစ်စက အရေးတကွီးအပွီးသတျရမှာမြိုးမရှိသေးလို့ဆိုပွီး ပေါ့ပေါ့ဆဆမနဘေဲ ကိုယျအပွီးသတျရမယျ့အခြိနျမှာ ပွီးအောငျ၊ ပွီးပွညျ့စုံအောငျ ပွငျဆငျထားသငျ့ပါတယျ။
အောငျမွငျခငျြရငျတော့ သူမြားထကျသာတဲ့အားထုတျမှု၊ သူမြားထကျသာတဲ့ လလေ့ာသငျယူမှုတှဆေိုတာ မရှိမဖွဈပါပဲ။ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ယှဉျပွိုငျပါ။ ဓားတဈလကျလို အမွဲတမျး သှေးပါ။ ဉာဏျရညျကို အသုံးခပြါ။ ပငျြးရငျး ဖငျြးမသှားပါစနေဲ့လို့..
Tags: Bad, Career, habits, Motivation, success, ways, Work Place